जो आफू भीर चढेर बाँच्न सफल भए तर सँगैका ८ जना सहकर्मीलाई सँधैका लागि गुमाए ! – Khabarhouse
Khabar house | ५ असार २०७८, शनिबार १६:२३ | Comments
काठमाडौँ — संखुवासभा मादी राम्बेनीका दिनेश दाहाल बीस महिनाअघि इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर भएर मेलम्ची पुगेका थिए । सिनोहाइड्रो कर्पोरेसनमा उनले कार्यभार सम्हालिरहेका थिए । कर्मथलोमा उत्साह पूर्वक काम गरेका उनले भीरपाखा चढेर ज्यान जोगाउनु पर्ला भनेर कहिल्यै कल्पना पनि गरेका थिएनन् । तर, गत असार १ गते मेलम्चीमा आएको बाढीले भने उनको मस्तिष्क खल्बल्याइ दिएको छ ।
यसपटक उनले मेलम्ची खानेपानीमा काम गर्दा कतिसम्म जोखिम हुने रहेछ भनेर समेत महसुस गरेका छन् । मेलम्ची खोलामा पानीको बहाव कहिले घट्ने कहिले बढेको त देखेकै थिए । तर उनले त्यस दिनमा खोलामा लेदो र हिलो सहितको फरक दृश्य देखे । साँझ सवा ६ बजे नजिकैबाट आउँदै गरेको खोलालाई उनी नियाल्दै थिए । अकस्मात खोलाले किनारमा रहेका अफिसका पर्खालहरु भत्काउन थाल्यो ।
त्यसपछि मान्छेहरु कुदाकुद गर्न थाले । के गर्ने कसो गर्ने उनले केही सोच्न सकेनन् । कहाँ भाग्ने ? भाग्ने ठाउँ पनि उनले देखनन्। त्यहीबेला कोही भीरमा चढ्दै गरेको देखे । उनले पनि त्यहीँ बाटो पछ्याए। पछि नफर्की उनी अठ्यारो भीरमा रुखका जरा समात्दै अघि बढ्न थाले । उनलाई कहाँ जाँदै छु के गर्दै छु केही थाहा भएन । उनी भन्छन्, ‘म यसरी आत्तिएँ कहाँ जाने थाहा भएन । कोही भीर चढेको देखेर म नि त्यतै लागेँ ।’
उनी भीर चढ्दै गर्दा उनको कम्मरसम्म पानी आइसकेको थियो। भीर चढ्न सहज थिएन अलिकति पनि खुटा चिप्लियो भने फेरि खोलामा पुग्ने अवस्था थियो । उनका अनुसार भीर डरलाग्दो थियो चढ्न गाह्रो थियो झर्‍यो भने सिधै खोलामा पुगिन्थ्यो। भीरको सहाराले आफू बाँच्न सफल भएको उनले बताए । उनले भने ‘सायद भीर समात्न नसकेको भए आज म बाँच्ने थिइनँ । उनी आफू बाँच्न सफल भए तर सँगैका ८ जना सहकर्मी गुमाउँदा दु:खी छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।